Diyaarinta koorsada ArcGIS - Geofumadas
Febraayo, 2010 ArcGIS-ESRI, cadastre, Baridda CAD / GIS
Wax yar ka yar hal usbuuc, waxaan bilaabayaa inaan dareemo walbahaarka koorsada ArcGIS, kuwa ka soo baxa cidda garaneysa halkaa, in aad aqbasho, ma ogaan marka, iyo in si lama filaan ah laguu gooyey.
Waa koox xiiso leh oo aan dooneynin in ay ku adkaato software la'aanta, kuwaas oo haysta lacagta iyo rajeynaya inay dhexgalaan ArcGIS. Muddo daqiiqado ah waxaan rabey in aan kuu soo bandhigo fursado kale, laakiin kiiskan, ArcGIS waa waxa adiga kugu haboon, xaalado badan, oo ay ku jiraan bixinta buugaagta iyo waqtiga aanan haysan koorso dheeri ah.
Waxay u baahanyihiin inay isku xiraan nidaamka cadawnta, oo aan arko faylasha leh nadaafad fayaqaaleed oo suuban. Waxaan ku faraxsanahay inaan ogaaday in khariidadahan ay dhisteen qofkii i baray Microstation dhowr sano ka hor, markaa wasakhda ay leedahay waa badeeco maskaxeed iyo daahir la'aan ah oo aan taariikhda. Tani waxay sahlaysaa in la ogaado halka ay isbeddelayaan iyo khaladaadka caatada ee suurtagalka ah.
Hadda, waxaan soo jeediyay qorshe cunto, sababtoo ah ma haystaan, mana aan ku xisaabtami karno waqti yar, haddii ay tahay inaad u safartid laba saacadood. Tababbarka fasalka waxaa lagu dabooli doonaa laba wiig usbuuc ah, iyo shaqooyinka usbuuca iyo taageerada laba toddobaad ah Gmail chat.
Ka sokow, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo talaabo tallaabo tallaabo ah oo ku saabsan hababka caadiga ah ee 7, kuwaas oo lagu aqoonsaday:
Falanqaynta lakabyada kale ee qorshaynta
Is dhexgalka Google Earth
Halkaan ayaan kuu sheegi doonaa sida ay u socoto, hadda waxaan dalbaday inaad mashiinnada diyaar u ahaato oo iigu soo dirto tusaalayaal xog ah si aad u sameysid geodatabase-ka. Iyo haddii wax waliba si fiican u socdaan, waxaa laga yaabaa in macallimiintu ay tallaabo tallaabo tallaabo iyo talooyin taageero ah ku soo gaba-geboobaan boggan.
Post Previous«Previous Abuuri khadadka fiilooyinka leh ArcGIS
Post Next Google wuxuu ku socdaa Facebook iyo TwitterNext »
5 Jawaabo "Diyaarinta koorsada ArcGIS"
Carlos Google ma qaniinyo
Marka laga hadlayo buugaagta, ma haysto wax ArcGIS ah oo ka badan kuwa laga helo webka. Tilmaantaan waxaan u diyaarinaa degmada aan la socon doono, markaan haysto waxaan halkan ku wadaagi doonaa, wali waan cayriyaa.
Hello saaxiib Carlos.
Farxad leh inaan ogaado in booskan uu kuu adeegay, ayaa sabab u ah baloogga. Mawduucaagu waa balaaran yahay, oo kama jawaabi karo qaaciidooyin sixir ah jawaab ahaan, si kastaba ha noqotee waxaan ku siin doonaa shuruudo qaarkood oo waxtar kuu yeelan kara.
Haddii aad leedahay liisanka softiweerka soomaliga ah, oo lacag aad u badan lagu maal geliyey, kuma talinayo u guuritaanka softiweerka bilaashka ah. Hagaag, haajiriddu sidoo kale waxay ka dhigan tahay maalgashi kale.
Laakiin haddii aan wax badan la maalgelin, oo ay jirto awood lagu maalgaliyo qayb ka mid ah wixii loo qorsheeyay shatiyada iyo horumarka, gvSIG, PostGIS, maareeyaha khariidadda, Bender ama qGIS waa aalado leh qaan-gaadhnimo ku filan dhismaha iyo daabacaadda, iyada oo lagu taageerayo khadka internetka bulshooyinka hirgalinaya hirgelintiisa. Xitaa Venezuela waa dhul ay ku jiraan shuruudo ku habboon ujeeddooyinkan.
Ku saabsan booqashada ... Waxaan u baahnaan lahaa inaan arko waqtigeyga, laakiin waxaan ku kalsoonahay inaan warqad u qoro tifaftiraha (arroba) geofumadas (dot) com waxaanan ka wada hadli karnaa siyaabaha aan kuu caawin karo.
salaan si Venezuela
Carlos Oropeza isagu wuxuu leeyahay:
Salaan, saaxiibkay, runtii waxaan ahay booqde firfircoon oo ku soo booqda boggaaga, fiiri xilliyada hadda aan ka shaqeyno halkan gobolka loo yaqaan La Caipatal de Venezuela mashruuc loogu magac daray Lara Digital halkaasoo nidaamka macluumaadka juqraafi ee gobolkeenu uu ka mid yahay Qaybaha aasaasiga ah ee mashruuca. Waxaan la shaqeyneynaa argis 9.1 iyo daabacaadda joornaalka hoostiisa oo ku yaal flex kaas oo api ku jira shabakadda ayaa naga caawiyay wax badan, laakiin dadka reer esri ayaa na siisay demo?, Xitaa haddii ay macquul tahay in aan Waxaan boostada boostada ugu diri doonaa buugyaraha koorsada aad sameyneyso iyo sidoo kale suurtagalnimada helitaanka qaar ka mid ah buugaagta argis ee aan jeclaan laheyn inay na caawiyaan. Bal u fiirso wax kale oo aan idhi waa inaan ka baaraandegnay baahida loo qabo in loo haajiro kombuyuutar bilaash ah, waad ogtahay qiimaha dadka Esri laakiin kama helin hagitaan qof ii sheega inuu ugufiican yahay sixir furan, fiiri waxaan u maleynayaa inaad tahay Ice cream aabe waa inuu dhahaa qofka aad ugu diyaarsan ee GIS wuxuu jeclaan lahaa inaad i caawiso oo aad hada soo dirto soojeedin si aad u booqato magaaladeena. Isaga oo sugaya tabarucaada iyo kaalmadaada xagga arrintan, ayuu ku salaamay hab wanaagsan oo isku dubbaridan oo ka socda dhulalka diiran ee Barquisimeto-Venezuela. Soo booqde geofumada firfircoon.
Christopher isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan xiiseynayay khadadkaagii ugu dambeeyay.
Taasna wax walba way soo baxaan, sidaas darteed waxaan ku xisaabtami karnaa waxbarashadan.